စျေးပေါသောစျေးနှုန်းဖြင့် Zhechi Electric
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > စမတ်အိမ် > စမတ်လော့ခ်
ဒစ်ဂျစ်တယ် လက်ဗွေရာ တံခါးလော့ခ်
Digital Fingerprint Door Lock သည် 2020 ခုနှစ်၏ နောက်ဆုံးပေါ် smart fingerprint BLE ထိန်းချုပ်မှုစနစ် တံခါးလော့ခ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ရိုးရှင်းသောအသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းနှင့် အဆင်ပြေသော WiFi အက်ပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ပါရှိသည်။ လက်ကိုင်ကို ကိုင်ထားပြီး ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းတွင် လော့ခ်ဖွင့်ရန် လက်ဗွေကို နှိပ်ပါ။ ၎င်းသည် စမတ်ကျသောဘဝ၏ အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံကို ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဤသော့ခလောက်ကို သစ်သားနှင့် လုံခြုံရေးတံခါးများအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး mortise အမျိုးအစားအားလုံးနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
လျှော့စျေး ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ဗွေ တံခါးလော့ခ်ကို အခမဲ့နမူနာပေးသည်။
1. ဒစ်ဂျစ်တယ် လက်ဗွေရာ တံခါးလော့ခ်အတွက် ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
Digital Fingerprint Door Lock တွင် အဆင်ပြေသော စီမံမှုစနစ်နှင့် လော့ခ်ဖွင့်ရန် နည်းလမ်း6ခု ပါရှိသည်- လက်ဗွေသော့ဖွင့်ခြင်း၊ BLE APP လော့ခ်ဖွင့်ခြင်း၊ အဝေးထိန်း WiFi လော့ခ်ဖွင့်ခြင်း၊ စကားဝှက်/ပင်နံပါတ် လော့ခ်ဖွင့်ခြင်း၊ ကတ်သော့ဖွင့်ခြင်း နှင့် စက်ခလုတ်များ လော့ခ်ချခြင်း။ ၎င်းသည် စမတ်လော့ခ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သင့်လိုအပ်ချက်အားလုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့် APP စီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့်၊ သင်၏စမတ်ဖုန်းသို့ စမတ်သော့ကိုချိတ်ဆက်ရန် WiFi သို့မဟုတ် BLE မှတစ်ဆင့်၊ သင်၏စမတ်တံခါးသော့ကို အချိန်မရွေး နေရာမရွေး စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါသည်။
2. ဒစ်ဂျစ်တယ် လက်ဗွေရာ တံခါးလော့ခ်အတွက် ထုတ်ကုန်လုပ်ဆောင်ချက်
သော့ဖွင့်ရန်နည်းလမ်း 1.1.6- WiFi APP အသုံးပြုခွင့်(ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်)၊ BLE APP အသုံးပြုခွင့်၊ လက်ဗွေသော့ဖွင့်ခြင်း၊ PIN ကုဒ်၊ ကတ်၊ စက်ခလုတ်သော့ဖွင့်ခြင်း
2. အဆင်ပြေသော APP စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ သင်သည် သင်၏စမတ်လော့ခ်ကို အချိန်မရွေး နေရာမရွေး စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
3. ဖုန်းတစ်လုံးတည်းဖြင့် လော့ခ်အများအပြားကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
4. ရိုးရှင်းသောတံခါးလက်ကိုင်ဆက်တင်များ, အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများအတွက်သင့်လျော်သော;
5. သင့်စမတ်အဆောက်အဦများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ကူညီရန် အဆင့်ပေါင်းများစွာ စီမံခန့်ခွဲသူ ဆက်တင်များ။
6. သင်၏အိမ်လုံခြုံရေးကို ပထမဆုံးသိရှိရန် အချိန်မရွေး နေရာမရွေး သော့ဖွင့်ခြင်းမှတ်တမ်းများ။
7. ကျစ်လစ်သောအရွယ်အစားသည် သစ်သားတံခါးများနှင့် သတ္တုတံခါးများအားလုံးနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
8. FPC လက်ဗွေဖတ်စက်သည် သင့်အား အကောင်းဆုံးလုံခြုံရေးအတွေ့အကြုံကို ပေးသည်။
9. ဓာတ်အားပြတ်တောက်ပါက အရေးပေါ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့ခြင်း၊
10. ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏လိုအပ်ချက်များ၊ OEM/ODM နှင့်အညီ ထုတ်လုပ်မှုကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။
hot Tags:: ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ဗွေ တံခါးလော့ခ်
Home Wifi Digital လော့ခ်
Remote Control Tuya Smart Door Lock
ရေစိုခံ Wifi အက်ပ်ဝင်ရောက်ခွင့် ထိန်းချုပ်ရေး စာဖတ်သူ တံခါးလော့ခ်
Home Electronic Electric Tuya App Wifi Smart Lock
အီလက်ထရွန်းနစ် လက်ဗွေရာ ဒစ်ဂျစ်တယ် စမတ်သော့တံခါး